Iibso Dharka Cagaaran ee A-Line-ka ee Sayniska Dabiiciga ah ee Dharka Cagaaran ee adag - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Vintage A-Line siraad Sleeve Backless Solid Mini Green Dress
Vintage A-Line siraad Sleeve Backless Solid Mini Green Dress - Cagaar / S gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Lambarka Moodalka: JG26401
Nooca Dharka: Fiber kiimiko
Mararka qaar: Maalin, Taariikh, Dibad bax, Xaflad, Marwada Xafiiska
Xusuusin: Fadlan si adag u raac jaantuska cabbirka si aad u doorato cabbirka. Ha ku xulin si toos ah hab dhaqankaaga. Wali ma hubo cabirka? Waxaan jeclaan laheyn inaan kugula talinno adiga oo ku saleynaya cabirkaaga buska, dhexda, iyo sinta. Cabirku wuxuu yeelan karaa kala duwanaansho 2-3cm sababtoo ah cabirka gacanta. Fadlan la soco markaad cabireyso Soo jeedin ah in gacmaha lagu dhaqo biyo qabow. Waxay ka caawin kartaa walxaha inay ilaashadaan qaabkooda.
Dhar qurux badan oo ka samaysan maro shaati ah. Kaliya jeexjeexyada ayaan ku jirin dhexda, laakiin wax yar ka sarreeya. Cabirka m wuxuu ku dhawaaday dhamaadka xuduudaha 88-63-87 iyo dhererka 160 cm. Dusha sare waa maro labalaab ah, oo ku jira darajada 27-30 aad u kulul. Ku saabsan minuses-jajaban oo aan aad ugu habboonayn in birta kor laga saaro. Midabku waa super, iibsigu wuu faraxsan yahay. Mahadsanid woopshop, si dhakhso leh ayaa loodiray)
Dhar aad u qurux badan, tayo leh, midab diiran. Waxaan qaatay cabirka M, waxaan xirtaa s. Way fiicantahay inaan qaato cabbir ka balaaran, maxaa yeelay gadaal gadaal ayey u fariisatay. Gaabiyey 8 cm (sawirka wuu ka gaabanyahay xaqiiqda). Gaarsiintu waa mid dhakhso badan.
Dharka waa wanaagsan yahay, tollan baa loo tolay. Midabku waa mid wacan, laakiin aan u dhalaalayn sida sawirka ku jira. Maan jeclayn sida tuuladu ii dul fadhiisatay. Garbo aad u weyn ayaa soo baxay, laakiin tani waa dhibaatadeyda. La soo celiyay iyadoo la sugayo lacag celin